I-EIBOARD Conference Interactive Flat Panel yiphaneli yokubhala ekrelekrele enekhamera eyakhelwe-ngaphakathi kunye ne-mic, esetyenziswa ngokubanzi kwintlanganiso kunye nenkomfa ye-intanethi.
I-EIBOARD Conference Interactive Flat Panel yiphaneli ekrelekrele yokubhala ye-4K enekhamera kunye ne-microphone eyakhelwe ngaphakathi, ikwayiphaneli ye-LCD esebenzayo ukwenza intsebenziswano edibeneyo yokubandakanyeka ngakumbi kunye nokuhamba kwendalo kweengxoxo ukukhuthaza ukuqamba izinto ezintsha kunye nokucamngca kwengqondo, abantu baguqukela kwiiphaneli ezisebenzisanayo. kwibhodi emhlophe yedijithali exhasa inkcazo yasimahla, kunye nepen-and-touch input. Zonke izisombululo zebhodi ezihlakaniphile ziza kunye neekhamera ezakhelwe ngaphakathi, ii-microphone kunye ne-pluggbale OPS ujongano lwekhompyutha eyenza iphaneli ilungele ukusebenzisana kwevidiyo.
I-EIBOARD Interactive Flat Panel sisisombululo se-ofisi esibonisa oko kuya kwenza wonke umntu athande iintlanganiso kwakhona.
Yenza iiNtlanganiso zeNkampani zisebenze ngakumbi
Intsebenziswano esebenzayo ibalulekile ekukhuleni kweshishini, kwaye itekhnoloji entsha ingundoqo ekwenzeni intsebenziswano.Idibanisa ngokungenamthungo iikhonsepthi zentsebenziswano kunye nobuchwepheshe ukwenza iNtsebenziswano +. Iphinda kabini njengebhodi emhlophe yedijithali kunye nenkqubo yenkomfa, eyenza ibe sisisombululo esifanelekileyo sentsebenziswano kumaqela abo nabuphi na ubungakanani.
Iphaneli ye-4K ye-Ultra HD ene-Anti-glare
Iphaneli ye-LED ibonisa imifanekiso ye-4K ye-Ultra ye-HD ngombala ocebileyo, ocacileyo kunye nephaneli yayo eqinile enomsindo inika indawo ekhuselekileyo kuyo yonke iminyaka ukuba iphefumlelwe kwaye ibonise ubuchule babo. I-anti-glare surface kukukhusela amehlo kunye nokunciphisa ukukhathala okubonakalayo.
Ifakwe Ikhamera ye-4K eneeMicrophone
Ikhamera ye-8M yeepikseli ze-4K iyahambelana nesoftware yenkomfa yevidiyo yomntu wesithathu, umz. Sondeza, iNtlanganiso yeTencent, iSkype, iDingtalk njalo njalo. Iimakrofoni ezi-6 ezinomgama we-pick-up ye-8m, yenza intlanganiso ye-intanethi ibe lula, ilula kwaye isebenze kakuhle.
UkuPhendula kwamanqaku angama-20 kunye neSihlomelo esiLungileyo
Sebenzisana nepeni engeyiyo eyeyakho okanye ngeminwe yakho. I-20-point touch touch ixhasa abasebenzisi abaninzi ukuba basebenze kwiphaneli ngaxeshanye. Inkxaso yesoftware yenkcazo eyakhiweyo ukucacisa onke amaxwebhu asebenzayo kunye neevidiyo phantsi kwayo nayiphi na inkqubo yokusebenza ngokulula nangokufanelekileyo.
Intsebenziswano kunye nokuzibandakanya
Izixhobo zegumbi lokufundela ziyakwazi ukusebenzisana ngokuthe ngqo kunye nephaneli kuwo onke amaqonga kwaye zabelane ngomxholo ngaphandle kwamacingo ngaphandle kosetyenziso okanye ufakelo lwehardware! Gxininisa umsebenzi wabafundi kwaye ukhuthaze intsebenziswano nobugcisa bethu bokwabelana ngesikrini.
Ifakwe kwi-Dual OS
I-Android OS efakelweyo igubungela uluhlu olubanzi lwezixhobo kunye nezixhobo, kwaye ngokulula ivumela abasebenzisi ukuba bachaze, basebenzisane, kwaye bathathe inxaxheba ngaxeshanye. I-OPS ye-plgguable ikhethwa yinkqubo yeWindows, esebenza ngokusebenza ngakumbi kunye nokugcinwa okunamandla.
Ngoyilo lokukhusela i-hardware, ukhuseleko lokutshixa ucango lukhethekile lwenzelwe ukungangeni kwamanzi kunye nothuli.
Ngaphambili: Itheminali eSebenzayo yeGumbi loMamkeli
Okulandelayo: LED Interactive Touch Screen
Iiparamitha zekhamera kunye neMicrophone
Ikhamera I-Pixel : 8.0 M Usombululo lwevidiyo: 3840*2160ILens: Ilensi yobude obuzinzileyo, ubude bojoliso obusebenzayo 4.11mmDrive: Free drive
Imakrofoni Uhlobo lwemakrofoni : Imayikrofoni yoluhlu lweDijithaliInani lamanqaku edijithali: 6 umgama wokuthatha : 10 mDrive: Windows 10 idrive yasimahlaUkucinywa kwe-Echo: Kuyaxhaswa
Amandla aphezulu ≤250W ≤300W ≤400W
Izinto / imodeli Nombolo. FC-65LED FC-75LED FC-86LED
Ubungakanani bephaneli 65” 75” 86”
Ubungakanani bemveliso 1490*906*95mm 1710*1030*95mm 1957*1170*95mm
Ubungakanani bokupakisha 1620*1054*200mm 1845*1190*200mm 2110*1375*200mm
Intaba yodonga iVESA 500*400mm 600*400mm 750*400mm
Ubunzima 41kg/52kg 56kg/67kg 71kg/82kg
Intlanganiso ye-Smart Whiteboard